बैंकर र कोरोना – BikashNews
बैंकर र कोरोना
२०७८ जेठ २४ गते ९:५३ सुशिल घिमिरे ‘त्रैलोक्य’
‘ओहो ! घिमिरेजी, अफिस जान लाग्नुभएको ? हामी सुरक्षित बसेकालाई तपाईंले कोरोना सार्ने हुनुभो जस्तो छ । सधैं बैंकको जागिर भन्दै लखरलखर अफिस जानुहुन्छ ।’
बिहान नौ बजेतिर अफिस जान बाइक निकाल्दै थिएँ, एक छिमेकीले प्याच्च यसो भनिदिए । उनकी श्रीमतीले पनि त्यही कुरालाई मलजल गर्दै भनिन् – हजुरलाई त आनन्द छ है, सरकारी कर्मचारी भनेर बिदा पाउनु भएकै छ, अरुबाटै पो डर भो त !
उनीहरुले मतिर घृणाले भरिएको नजरले हेर्दै यसो भन्दा बार्दलीबाट उज्यालो अनुहार लगाएर मलाई ‘बाई’ गर्न पर्खेकी श्रीमतीको मुख अकस्मात अँध्यारो भयो ।
जहिल्यै एकछिन बाइकमा घुमेर मात्र मलाई अफिस जान दिने छोरी आव्यातिर पुलुक्क हेरें । मेरो मन अनयासै अमिलो भएर आयो । थुक घुटुक्क निलें । र, मन नलागे पनि खिस्स हाँसे जस्तो गरेर श्रीमतीलाई ‘बाई’ भन्दै बाइक स्टार्ट गरें ।
मनमा कुरा खेलिरहे बाटोभरि । हुन त मलाई यी छिमेकीले मात्रै यस्तो व्यवहार गरेका होइनन् । टोलभरिकै मान्छेबाट यस्तै भोग्दैछु । मलाई देख्नासाथ त्यसै परपर हुन खोज्छन् । वास्तवमै उनीहरु मसँग भौतिक दुरी होइन, मलाई तिरष्कार गर्न चाहन्छन् । सामाजिक दुरी अझ भनौं मानवीय दुरी राख्न उद्धत छन् ।
सिमित समय खोलिने खाद्यान्न पसलमा पनि यस्तै भोग्दैछु ।
‘तपाई परै बस्नु है ! बैंकको कर्मचारीलाई नजिक आउन मनाही छ नि !’
किराना पसलेले भनेको यस्ता वाक्य सुन्नु मेरो दैनिकी बनेको छ अचेल ।
छिमेकी र नजिकका पसलेहरुले मात्रै कहाँ हो र ! कतिपय आफन्त पनि मबाट टाढिन खोज्दैछन् ।
‘कस्तो क्षेत्रमा जागिर गरेको तिमीले, कोरोना हट्ने छाँटकाँट छैन, बरु नोकरी नै अरु क्षेत्रमा खोज’ भन्ने ‘सुझाव’ दिन थालिसके आफन्तहरु । । यस्ता सुझाव मेरा लागि सुझावभन्दा पनि मुटु प्वाल पार्ने बाण बन्न थालेका धेरै समय भइसक्यो ।
नौ बजेर तीस मिनेटमा क्लक इन (सिस्टमबाट हाजिर) गर्दै थिएँ । सहकर्मी दिपकजीले हस्याङ् फस्याङ् गर्दै सुनाए– घिमिरेजी, थाहा पाउनुभयो ? हाम्रै बैंकबाट अर्को बैंकमा गएका आकाशजी थिए नि, उनी त हिजो राति कोरोनाकै कारण वितेछन् । म ट्वाँ परें । साह्रै नमज्जा लाग्यो ।
कारोबार दश बजेदेखि मात्र शुरु हुने भएकोले आधि घण्टासम्म सबै स्टाफहरु चिया पिउँदै गफ गर्न थाल्यौं ।
‘कोरोनाले बैंक र बैंकर परिवारका करिव दुईसय जना मरिसके, पन्ध्र–सोह्र हजार जति अझै संक्रमित छन् भन्ने सुनिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र अब के होला ? अर्थतन्त्र के होला ? अब कता जाला ?’ लोन फाँटका विकाशजीले कुरा अगाडि वढाउँदै लगे ।
त्यत्तिकैमा सीएसडीकी रेसाजीले भन्न थालिन्– ‘आकासजीले त भर्खरै मात्र घर बनाउनु भएको थियो । करिब पचास लाख जति लोन छ भन्ने सुनेको थिएँ । त्यहि घर धितो राखेर अनि जागिरकै इन्कम देखाएर लिनुभएको थियो । त्यसमाथि त झन् भाउजु पनि नोकरी गर्नुहुन्न । परिवारको मञ्जुरी बेगर भगाएर विवाह गरेको हुनाले माइतीले पटक्कै सपोर्ट पनि गरेका छैनन् रे । हो, यस्तो परिवेसमा लोनको के हुन्छ ? यस्तो जोखिमको बेला पनि बैंकले आकाशजीलाई काम गर्न लगायो । अनि अब उनको मृत्यु हुँदा उनीप्रति आश्रित परिवारको भविष्य के हुन्छ ? ऋण तिर्न सकेन भनेर धितो जफत गरी परिवारलाई सडकमा ल्याइदिन्छ हो ?’
रेसाजीको तर्क र उदाहरण असाध्यै अमानवीय र असामाजिक थियो । एउटा सहकर्मीको नामै लिएर उसको मृत्यूको सम्भावना बारे रेसाजी खुलमखुल्ला बहसमा उत्रिएकी थिइन् । उनको कुरा सुनेर दिक्क लाग्यो । तर, कटु सत्य रेसाजी कुराको असाध्यै निकट थियो । त्यसैले होला, रेसाजीलाई कसैले केही पनि भनेन ।
हामी सबैको नजर एकसाथ म्यानेजर सरतिर सोझिएछ । हाम्रो मौन प्रश्नको जवाफ दिन थाले । मेनेजर सरले आफूलाई थाहा भएसम्म त्यस्तो कुनै नियम बनि नसकेको, तर चाँडै नियम बन्ला भन्ने आशय व्यक्त गरे ।
‘अरु कुरा त्यस्तै हो, बचेर काम गर्नु, सेफ्टी फस्ट है, कसैलाई केहि भइहाल्यो भने मलाई कल गर्नु, म पर्सनल्ली मबाट हुने नभए आफैले, माथिबाट हुने काम रहेछ भने माथि कुरा गरेर भएपनि तिमीहरुको सुरक्षा गर्छु ।’
यस्तो डिप्लोम्याटिक जवाफ दिएर म्यानेजर सर आफ्ने केबिनतिर लागे ।
रेसाजीको गुनासो सकिएको रहेनछ । म्यानेजर सर गइसकेपछि भनिन्– हाम्रो बीएम त काममा चाहिँ अत्ति कडा तर, यस्ता कुरामा चाहिँ साहै नरम है । स्टाफको समस्या साह्रै बुझ्ने के ।
रेसाजीको ब्यांग्यमा आक्रोस पनि देखियो । दिपकजीले डर देखाउदै भने अँ, काममा लास्टै कडा, यस्तो कडा मेनेजर त कुनै बैंकमा नहोला, अहिले गाली गर्लान्, के के छ पेन्डिङ काम गरिहालुम है ।
अनि हास्दै सबै जना आ–आफनो डिपार्टमा लाग्यौं ।
म बैंकको पनि फ्रन्ट लाइनमा अझ भनौं, टेलरमा काम गर्ने स्टाफ । कस्टमरबाट आएको चेक, डिपोजिट भौचर र पैसा नियमित छोइरहनु पर्ने हुन्छ । त्यति मात्र कहाँ हो र, अशिक्षित, जेष्ठ नागरिक, हात काम्ने विरामी, हस्ताक्षर मिलाउन नसक्ने खातावालाले ल्याप्चे राखेका हुन्छन् पैसा भिक्न र राख्न । यस्ता कस्टमरको हात समाएर ल्याप्चे लगाइदिनु पर्छ । बृद्धभत्ता बाढ्ने बेलामा भत्ता लिन आउने हजार जना भन्दा धेरै ल्याप्चे लगाउने खातावालाको हात समाएर चेक बिग्रन्छ वा सहि ठाउमा लाग्दैन भनेर औला छुनु पर्ने हुन्छ । डर त लाग्छ नि मलाई पनि । तर, पेशा र पेशागत धर्म ठूलो कुरा हो । म र म जस्ताले गम्भीर भएर बुझेका छौं र बुझ्नु पनि पर्छ । गुनासो यत्ति हो, खालि हामी बैंकरलाई मलाई गरे जस्तो तितो व्यवहार टोल समाजले नगरे हुन्थो ।
सातामा आलो पालो र हप्तामा दुई दिन हाम्रो शाखा खुल्ने सिमित समय हुनाले सेवाग्राही भिड झन बढी हुन्छ । भिडभाडमा चेक इन्ट्री गर्दै थिए । बाहिरबाट एक जना बृद्ध महिलाको अवाज मेरो कानमा ठोक्कियो ।
उनी गार्ड दाइसँग भन्दै थिइन्– बावु ! मेरो छोरा बिरामी छ, हस्पिटलमा छ, हतार छ, भित्र जान दिनु न…।’
गार्ड भन्दै थिए–तपाई भर्खर आउनु भएको, उहाँहरु आधा घन्टादेखि लाइनमै हुनुहुन्छ, उहाँहरु पछि तपाईको पालो हो ।
गार्डदाइका पनि आफ्नै दुःख छन् । अघिदेखि लाइनमा बसेका कस्टमरलाई पहिला पालो नदिने हो भने त्यहाँ अर्काे समस्या सिर्जना हुन्छ । उनी पहिला आउनेले पहिला सेवा लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनै त्यहाँ बसेका हुन् । उनको ड्युटी नै त्यही हो । मलाई हतार छ, मलाई पहिला पैसा निकाल्न वा राख्न दिनुस् भनेर नभन्ने व्यक्ति को नै हुन्छ र !
मान्छे मेसिन होइन, ताकि जे कमाण्ड दियो, त्यही एक्सन होस् । मान्छेले नियमको पालना गर्नुपर्छ । र, उसले विबेक पनि बिर्सन हुँदैन । तर, विबेक प्रयोगमा पनि ओहोदाको भूमिका हुन्छ भन्ने सुनिन्छ धेरैजसो । त्यसैले होला, गार्ड दाइ नियमको कुरा गरिरहेका थिए पटक–पटक ।
मलाई त्यहाँ केही व्यवहारिक समस्या भयो जस्तो लाग्यो । कार्यकक्षबाट बाहिर आएँ । ती महिला नजिक गएर सोधेँ ।
‘बाबु मेरो छोरा हस्पिटलमा छटपटाइरहेको छ, चाढै पैसा लिएर जानुपर्नेछ, कोरोनाले विरामी भएर अक्सिजन सिलिन्डर र दवाइ किन्नु छ ।’
उनी असाध्यै छटपटीमा थिइन् । चाढो पैसा निकालेर जान पाए आफ्नो छोरा बचाउन सकिन्छ भन्ने आश होइन विश्वास थियो उनमा । उनी लाइनमा पालो कुरेर बसेकाहरु, म र गार्ड दाइतिर पालैपालो हेर्दै छिटो पैसा निकाल्ने व्यवस्था मिलाइदिन याचना गरिरहेकी थिइन् ।
उनको कुरामा कन्भिन्स भएँ ।
‘आमालाई धेरै समस्या भएको रहेछ, मानवीय नाताले पनि उहाँलाई पहिला पैसा निकाल्न दिऊँ है, यस्तो समस्या हामी जो कोहीलाई पनि पर्न सक्छ, तपाईहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्यो ।’
मैले यसो भन्दा लाइनमा बसेका सबैले हुन्छ भने ।
ती बृद्धालाई भित्र बोलाएँ । भित्र पस्ने वित्तिकै पटुकाबाट गुजमुज्ज परेको खाली चेक निकालिन् ।
चेक भर्न आउछ ? मैले फेरि सोधे । आउदैन– उनले भनिन् । उनलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ झिक्नु पर्ने रहेछ ।
मैले चेक भर्न जान्ने अर्काे मान्छेलाई (बैंकको कर्मचारी, त्यसमा पनि टेलरले भरसक नभर्नु भन्ने प्रचलन छ, जोखिमका हिसावले ) चेक भराएर खातामा इन्ट्री गर्दै थिए, खाता धेरै दिन नचलाएर इन एक्टिभ (डोरमेट) देखायो । खाता त धेरै दिन भएछ नचलाएको है आमा भन्दै एक्टीभ गर्न अर्को फर्म भराएँ । ल्याप्चे थिच्न लगाएँ । र, उनले भने अनुसार खुजुरा पनि वनाइदिए पचास हजार जतिको । सायद अटो भाडा, दवाई लगायतमा खर्च गर्न सजिलो हुन्छ भनेर चानचुन गरिएको होला
मैले दिएको पैसा हातमा लिदै उनी मलाई धन्यवाद भन्न लागिन् ।
‘बाबु धन्यवाद ! तपाई त कति सहयोगी, मर्म बुझ्ने, मेरो छोरा जस्तै, यस्तो कोरोनाको बेला पनि नडराइ आउनुभएको छ अफिस । बचेर काम गर्नु है । मेरो छोरा पनि तपाईहरु जस्तै कर्मचारी हो । पुलिसमा छ । काम गर्दा गर्दै कोरोना लाग्यो । तपाई त छोरा जस्तेैे । बाबुलाई नलागोस कोरोना ।’
म पनि उनलाई छोड्न बाहिरसम्म निस्किएँ । लाइनमा लागेकाहरुलाई र मलाई पनि धन्यवाद भन्दै उनी अटो चढेर गइन् । उनको खुसी देखेर मलाई पनि आत्मादेखि नै सन्तुष्टी पलायो ।
अफिस बिदा भएपछि घर आइपुगें । वाइक रोकेर गेट खोल्दै थिए भित्र राख्न । मन डराइरहेको थियो । छिमेकीले बिहान भनेको सम्झिरेको थिएँ ।
तर, हिजो अस्तिको जस्तो गरी ‘घिमिरेजी आउनु भयो ? कोरोना त ल्याउनु भएको छैन नि अफिसबाट’ भन्ने आवाज अहिले आएन । अनौठो लाग्यो । घरभित्र छिरें । श्रीमतीले ल नुहाउनु , म नास्ता वनाउछु भनिन् । म नुहाउन लागें ।
नास्ता खान डाइनिङ टेवलमा वस्दै गर्दा श्रीमतिले सुनाइन्– थाहा छ, त्यो पल्लो घरको छिमेकीको छोरालाई हस्पीटल लगेको छ नि दिउसो । के भएको नि ? मैले प्रश्न गरें । दिउसो खेल्दा लढेको, खुट्टा भाच्चियो सायद । हस्पीटलमा छन् ।
हत्तनपत्त नास्ता पनि खान छोडेर अस्ति तिमीलाई राख्न दिएको तलब देउ त भन्दै वाइक स्टार्ट गरें । कहाँ जान लाग्नु भएको ? किन चाहियो पैसा ? भन्दै उनी सोध्न थालिन । हस्पीटल, बच्चालाई हेर्न, सहयोग चाहिन्छ कि वुझ्न भन्न लागेँ ।
उनले फेरि भनिन्, भन्न त नहुने हो, तपाइलाई जहिल्यै प्याच्च प्याच्च भन्नेलाई के सहयोग गर्नु जस्तो लाग्छ एकमनले । तर, अरु त्यस्तै भए भनेर आफु पनि त्यस्तै हुनु भएन, ल लिनु पैसा, अनि पुगेपछि मलाई पनि खबर गर्नु है भनिन् ।
हस्पीटल पुगेपछि र उनलाई भेटेपछि सबै कुरा थाहा भयो । एउटा खुटा भच्चिएछ छोराको । अरु ठाँउमा पनि चोट लागेको रहेछ । पैसा पनि आवश्यक रहेछ । उनले भने के गर्नु बैंकमा त पैसा छ नि, बंैकरले पनि भनेको हो नि एटिम लिनु भनेर । मोवाइल वैंकिङ सेवा लिनु भनेर । यो वाटो दिनमा दश चोटि हिडिन्छ किन चाहियो भनियो, अहिले आफूले खाता खोलेको बंैक र पैसा भएको बंैक तिन दिनमा (साताको दुइ दिन) निकोर्सि मात्र खुल्ने रहेछ । कोरोनाले र आलोपालो खुल्ने कारणले तर अहिले मलाई पैसा आवश्यक भयो । आफन्तजन, दाजुभाइ पनि यस्तो कोरोना को वेला हड्ने माहौल छैन नभए हेर्न आउथे हस्पीटल भन्दै फोनमा मात्र कुरा गर्छन् । उनी मलिन अनुहार लगाएर भन्दैथिए ।
ह्या, त्यती सानो कुरा, ल लिनु मसँग अहिले तीस हजार छ, काम चलाम, अरु पैसा मेरो खातामा छ । चाहिए एटिमबाट निकाल्छु । पछि तिर्नु होला भन्दै आश्वासन दिएँ । अनि बाबुलाई दुई तीन दिन राख्नु पर्छ तपाई भाउजु यतै हस्पीटलमा बस्ने होला, खाना के गर्नु हुन्छ ? सुत्न वस्न ओछ्यान तन्ना के छ ? म भरे आउदा खाना र अरु चाहिने सामान ल्याइदिन्छु भन्दै सहयोग गरे । र, दुई दिनसम्म म पनि हस्पीटल र घर गर्दै व्यस्त भए । परेको बेला त हो नि सहयोग गर्ने ।
दुई दिनपछि बाबुलाई घर ल्याइयो । मसँग कोरोना सर्छ कि भनेर टाढ टाढा हुने उनी केहि दिनपछि घरमै आएर पैसा फर्काउँदै निदाउरो अनुहार लगाएर सोफामा बस्दै भन्न थाले–तपाईलाई मैले कत्ति नराम्रो भने, कत्ति पेच हाने, कोरोना सार्नु हुन्छ भने, तपाईबाटै कोरोना सर्छ मात्र भनिनँ, अरु टोल भरिकालाई पनि तपाईबाटै सर्छ भनेँ । त्यति मात्र कहाँ हो र किराना पसलमा पनि हाम्रो टोलमा घिमिरेजी छन्, बैंकमा काम गर्छन् अति आवश्यकीय क्षेत्र हो, बच्नु है उबाट भनेर नकारात्मक कुरा सुनाए । मलाई माफ गर्नु होला । परेको वेला कोरोनाको डरले कोही आएनन् । तर, तपाईं आउनु भयो र सहयोग गर्नुभयो । तपाई र तपाई जस्ताले मलाई मात्र होइन, लाखौं सेवाग्राहीलाई उनीहरुकै लागि ज्यान जोखिमा राखेर सेवा भावले काम गर्नु भएको छ । अति आवश्यकीय क्षेत्र भनेको मैले बल्ल थाहा पाए । मलाई माफ गरिदिनु होला घिमिरेजी भन्दै उनी पश्चाताप गर्न थाले ।
मैले पनि कुरा मोड्दै र उसलाई असजिलो नबनाउन ह्या, छोड्नुस यस्तो कुरा, बरु सुन त मिठो चिया बनाउ न वरु चिनी अलि कढा हाल है भन्दै मेरो श्रीमती तिर हेर्दै भने । मिठो खायो भने सम्वन्ध कडा हुन्छ क्या, यसो भन्दै हामी तिनै जना हास्यौं ।
आज फेरि अफिस जाने बेलामा घरको गेटमा बाइक निकाल्दै स्टाट गर्दै थिए । उने छिमेकी आफ्नो बरन्डाबाट हास्दै भन्न थाले घिमिरेजी बैंक जान लाग्नु भएको ? राम्ररी जानु होला है, आफ्नो त अफिस वन्द छ घर वस्दा वस्दा बोर भइसकें ।
अनि उनको श्रीमतिले पनि हास्दै भन्न थालिन् उहाँको त अति आवश्यकीय क्षेत्र हो, उहाँ त फ्रन्ट लाइनर हो, सवैको कहाँ भाग्य हुन्छ र फ्रन्टलाइनर भएर सेवा गर्नलाई ।
उनले यसो भन्दै गर्दा मेरो श्रीमती पनि आज उज्यालो अनुहार लगाएर हास्दै थिइन् । छोरी आव्या पनि वाइ–वाइ बाबा भन्दै हात हल्लाउदै थिइन् । म पनि आज फ्रन्ट लाइनर भएकोमा गर्व गर्दै थिएँ । वास्तवमै सवैले कहाँ पाउछन् र अति आवश्यकीय क्षेत्रमा काम गर्न, फ्रन्ट लाइनर हुन र सेवा गर्न ।
सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघ्दा ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा बैंक, राष्ट्र बैंकले पौने २ खर्ब बजारमा पठायो
नबिल बैंकले वार्षिक ७ सय युवालाई उद्यमी बन्न सहयाेग गर्ने
निश्चित वस्तुको एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, चाँदी आयातमा थप कडाई
यस्ता छन् मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा मार्फत भएका नयाँ व्यवस्था (पूर्णपाठ)
सीडीको व्यवस्था यथावत, कार्ययाेजना राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने